Honor 10 မိတ်ဆက်မယ့်ရက်အတိအကျထွက်ရှိလာပြီ – AsiaApps
Honor 10 မိတ်ဆက်မယ့်ရက်အတိအကျထွက်ရှိလာပြီ
April 9, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Honor 10 မိတ်ဆက်မယ့်ရက်အတိအကျထွက်ရှိလာပြီ
Huawei ရဲ့ Sub-brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Honor ဟာ Honor 10 ကို Event တစ်ခုကျင်းပပြီးလာမယ့် ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Specification တွေကိုကြေညာထားခြင်းမရှိပေမယ့် Honor 10 ရဲ့ Poster မှာတော့အနည်းငယ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ၅ ပေ ၈ လက်မရှိနေပြီး Kirin 970 chipset နဲ့ run သွားမှာပါ။ မျက်နှာပြင်အပေါ်ဆုံးမှာ Notch လေးပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လတုန်းကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ P20 လိုပဲ 12MP+20MP ရှိတဲ့ အနောက် Dual ကင်မရာပါဝင်နေဉီးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Honor 10 မှာ P20 ရဲ့ Twilight Signature ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်သလို AI feature ကိုပါမျှော်လင့်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ Honor ရဲ့ Event တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီ မေလ event မှာ Honor 10 ကိုမိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ အားလုံးကမျှော်မှန်းထားကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အခုလိုပဲဖြစ်သွားပါပြီ။ မေလ event မှာ Honor ဘာကိုထပ်မံမိတ်ဆက်သွားမှာလဲ ? Huawei P20 Pro လိုမျိုး Triple ကင်မရာပါဝင်တဲ့ Honor 10 Pro ကိုမိတ်ဆက်မှာလား… ဒါမှမဟုတ် နောက် Flagship တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်မှာလား.. စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ!
ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို control လုပ်နိုင်တဲ့ Remote Mouse